Hampiasa olona 400… : hanaovana asa tanamaro ny fandraofana fako | NewsMada
Hifandrimbonan’ireo minisitera ny fanadiovana ny tanànan’Antananarivo.Omaly, nampahafantatra ny minisiteran’ny Mponina sy ny raharaha sosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy fa hanatanteraka asa tanamaro ho fandraisana anjara amin’ny fanadiovana.
Mahatratra 400 ireo olona hanatanteraka izany asa tanamaro izany.
Hiasa andro aman’alina eny Ambolokandrina, Ambohipo, Ankatso, Andavamamba, Ilanivato ary Anosipatrana ireo olona ireo. Sady fandraisana anjara amin’ny fanadiovana ny tanàna no fitsimbinana ny olona latsaka anaty fahasahiranana izao asa tanamaro izao raha ny fanazavana. Sandaina 3.500 Ar isan’andro ary 5000 Ar isan-kalina ireo olona ireo ary maharitra ora dimy ny asa. Novatsiana fitaovana ihany koa ireo olona hanao asa tanamaro ireo.
Tsiahivina fa efa nisy ny asa tanamaro nandritra ny telo andro nataon’ny minisiteran’ny Mponina natao teny Ampefiloha Ambodirano ny 23 ka hatramin’ny 26 desambra lasa teo. Manodidina ny 100 ireo olona nandray anjara tamin’izany.